Creative Writing » ​ဂေါပကဖြစ်​ခဲ့ရင်​ဖြင့်​…	13
Posted by moonpoem on May 7, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 13 comments
ပဲခူးမြို့​ရွှေမော်ဓော ဘုရားသို့ ဂျပန်ဧည့်သည်များနှင့်အတူ​​ရောက်ရှိချိန် မွန်းပိုအမ် တစ်ယောက်၏ရင်ထဲတွင် လှူချင်တန်းချင်​
စိတ်များ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာသည်။လက်တွေ့ အကောင်အထည်​ဖော်သည့် အနေဖြင့်တစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်တိတိကို သွားလှူ
လိုက်သည်။ဘုရားဂေါပကဦးလေးကြီးမှလည်း ယခုလို လှူရခြင်း
အကျိုးကြောင့်ဘယ်ဘက်က တစ်ဆုပ်ကြဲလို့ ညာဘက်ကတစ်လှည်း
၀င်ပါစေဗျားဟု လော်စပီကာမှ ကြေညာလေသည်။
စူးစမ်းတတ်သော ဧည့်သည်တစ်ယောက်က ဂေါပကမှ
ဘာကြေညာသွားသလဲဟု လာမေးလေသည်။လျှာလည်းရှည်သလို စိတ်လည်းရှည်သော(ကြော်ငြာဝင်သည်) မွန်းပိုအမ်ကလည်း အနည်းငယ်မျှသာလှူသည်​ဖြစ်သော်ငြား သဒ္ဓါစိတ်အပြည့်နဲ့
လှူရသောအကျိုးကြောင့် ပိုက်ဆံကို လှည်းတစ်စီးစာဝင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတာဖြစ်ကြောင်း တိတိကျကျ ပြောပြလိုက်သည်။
ဧည့်သည်က ​ခေါင်းတညိတ်ညိတ်ဖြင့် နားထောင်သော်လည်း အဆုံးသတ်​ကောက်ချက်ချသွားသည်က ပိုက်ဆံက ၀င်လာမှာပေမယ့် လှည်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ ကြာနေမှာပေါ့နော်တဲ့။သူ့အတွေးနဲ့သူကတော့
မွန်းပိုအမ်လည်း သြော်ငါနောင်တစ်ချိန် ဘုရားဂေါပကဖြစ်သော
အခါမှ လာလှူတဲ့သူတွေကို ဘယ်ဘက်ကတစ်ဆုပ်ကြဲလို့ ညာဘက်က ဒုံးပျံတစ်စီးစာဝင်ပါစေဟု ဆုတောင်းပြင်ပေးမည်ဟု အကြံရချေ
မြစပဲရိုး says: ဒုံးပျံ ဆို ဝရောကနဲ တက်သွားလို့ ကိုယ့်မှာ မမှီ လိုက် ရှိနေဦးမယ်။
Shinkansen လောက်ဆို တော်ဦးမယ် ထင်ရဲ့ ကလေးမရဲ့။
ဒါတောင် တရုတ်ဖြစ် နဲ့ ဂျပန်ဖြစ် ဘာက ပို သင့် မလဲ ကြည့်လိုက်ဦး။
kai says: သချာ်မတွက်တတ်တဲ့ခေတ်ကအတိုင်း… ဆက်တွန်းနေသမျှ… သချာ်မတွက်တတ်သူတွေက.. နှပ်ချတာခံနေရမှာပဲ..
မရှိလို့လှူ.. လှူလို့မရှိ… မဖြစ်နေနဲ့…လို့..။
အလုပ်လုပ်ပြီး.. လုပ်အား.. ဥာဏ်အားနဲ့ငွေရှာကြ…။
လှူတဲ့ငွေတချပ်တိုင်း..အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းဖေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါစေ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးတဲ့သူကို ကြည့်လိုက်ပြီးကတည်းက သဂျီးနဲ့တော့ တွေ့ပြီလို့ ထင်လိုက်မိတာ။
လကဗျာလေးပြောချင်တာက အသွင်သစ်ဖြစ်လို့ အထင်နဲ့ အမြင် ကွာသွားတယ်လို့ထင်ပေမယ့်….
moonpoem says: ဟုတ်​တယ်​အစ်​မ​ရေ။နိုင်​ငံမတူ​တော့ ​တွေးတာ​ခေါ်တာ​တွေလည်း မတူကြဘူး​နော်​။သူ​​တွေးသလိုကျွန်​မဖြင့်​ တစ်​ခါမှ မတွေးဘူးဘူး။စဉ်းစားစရာ​လေးဖြစ်​သွားတာ​ပေါ့။ :-D
ခင်ဇော် says: ဂေါပကဖြစ်ခဲ့ရင် ရွှေဆိုင်ဖွင့်သင့်တယ်တို့ ဘာတို့။
Wow says: ဘုရားအလှူ လေလံဆွဲတာတို့… ဘာတို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဆွမ်းကြီးခံ​ ကန်​ထရိုက်​ဆွဲတယ်​တို့ဘာတို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: မွန်းပွမ်လေးဂ ဂျပန်ဂိုက်ပါရားး…
အ အိ့ အု အဲ့ အို.. ခ ခိ ခု ခဲ့ ခို.. အ အိ့.၊ အ အီ.. အုစ်. အဲ့အထိပဲ ရတယ်လို့..။ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ဖတ်ပြီးပြုံးသွားပါတယ် .စကားအတင်းစပ်..သဂျီး အရုပ်ကလေးတွေက သေးသေးလေးတွေဖြစ်ကုန်ပါလား
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကုန်တင်ကားတစ်စီးစာလောက်ဆို တော်ပါပြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: အဟီးဟီးဟီး ရီလိုက်ရတာ လူတွေရှေ့ပါးစပ်ကြီးအတင်းစေ့ထားရတဟ်
Alinsett @ Maung Thura says: သူတို့အတွေးနဲ့ သူတို့တော့ ဘယ်မှားမလဲနော့
ဒီခေတ်က လှည်းခေတ်မှ မဟုတ်တာကိုးးး
အဲ. . . ဘာသာရေးအယူအဆ အတွေးအခေါ်တချို့ကသာ လှည်းခေတ်မှာ ကျန်ရစ်တာ. . ကိုယ်တွေက. . .
တနေ့ တစ်လံနဲ့ ပုဂံကို သွားမယ့် လူမျိုးတွေ
ပလို့ဂျိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: အရင်ကဂေါပကဆိုကျားချည်းပဲ